Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu ngendwangu ebushelelezi nenhle, ibonisa impilo yesikhumba ngokwazo kanye nenyama yonke. Ngokuvamile kwenzeka ukuthi uzibuke esibukweni, sibona owesifazane onombono ongathandeki wokuqeda. Njengoba unesikhumba esikhathele futhi esikhathele, ngethoni lesikhumba elimhlophe noma eliluhlaza. Lesi simo singaba nezizathu eziningi, futhi okuvame kakhulu ukunakekelwa kwekhanda okunganele futhi okungalungile, ukuhlukunyezwa kwemikhuba emibi njenge-nicotine, utshwala, ikhofi kanye nabanye, umsebenzi ompofu wamathunjini, ukungondleki. Amasks ukuthuthukisa ukukhanya kwamakhambi abantu, sifunda kule ncwadi. Amakhambi omphakathi namaski athuthukisa umbala wesikhumba
Susa ukucwenga, qinisa isikhumba, uthuthukise ubuso, usize imaski:
Ukwenza lokhu, lungiselela ukumnika kwembewu ye-flax. I-Zalem ithisipuni 1 yembewu eyomile ½ indebe yamanzi abilayo, ikhava ngesembozo bese ushiya imizuzu engu-20. Khona-ke siyancipha, silethe ukumnika okubilisiwe kumathumba, uthele inani elincane le-1 isipuni se-oat flakes. Ukuze ukumnika ukumboza ngokuphelele kugubha ama-flakes. Masihambe isikhashana, ukuze ama-flakes avuke, bese sibeka i-gruel efudumele ebusweni. Ngemva kwemizuzu engu-15 noma engu-20, sigeza ubuso ngamanzi afudumele.
I-Watermelon, i-melon, izosiza ekuthuthukiseni ubude uma isetshenziswa ngaphandle. Ukuze senze lokhu, sibeka inyama ye-ikhabethe noma ikhaloni imizuzu engu-15 noma engu-20, yenza njalo njalo ngosuku ngezinsuku ezingu-25 noma ezingu-30, bese isikhumba sakho sizothola umbala omuhle futhi unempilo.
Mask for isikhumba esikhulile ethuthukisa ubuso
Izaqathe ze-Nutrim kwi-grater encane, thatha isipuni esingu-1 sobuningi obangele, engeza i-yolk 1 no-1 isipuni samazambane afudumele. Konke esizokwenza sizwakalise futhi sizobeka phansi ebusweni. Ngemuva kwemizuzu engu-15 noma engu-20, ake sihlanze ubuso bethu ngamanzi afudumele bese-ke ngamanzi apholile. Mask smoem ubhiya olufudumele.
Ubisi obomvu obuthuthukisa ikhanda
Thatha ingilazi ye-¼ yokukhanya okufudumele, isipuni esingu-1 se izaqathe ezivuthiwe, isipuni esisodwa sefulawa samazambane, i-yolk 1.
Hlanganisa zonke izithako, uma sithola i-mask eyisiketshezi, engeza isanqante esincane eligayiwe noma ufulawa omncane. Sibeka ubuso emaminithini angu-15, bese sihlanza ubhiya obusele futhi obushushu, bese ugeza ubuso bakho ngamanzi apholile.
Mask ukuthuthukisa ubuciko kwanoma yiluphi uhlobo lwesikhumba
Gubungula ngokuphelele inyama ye-apricot evuthiwe noma i-peach, inyakaza ngesilinganiso esifanayo se-oatmeal ukuze singenzi ubukhulu, hhayi ubuningi bamanzi. Ngesikhumba esomile, engeza isipuni 1 samafutha omifino. Sizobeka imaski etholakalayo ebusweni isendlalelo esiningi, bese sibheka emaminithini angu-15 noma angu-20.
Indlela enhle yokuthuthukisa umbala ebusweni ukugubha isikhumba sobuso ngamaqabunga e-ice. Zenziwe kusuka ekunqumeni kwemifino enjengale: i-yarrow, i-string, i-mint, i-linden, i-sage, i-calendula, i-chamomile. Kodwa uma ubhekene ne-capillaries ehlanjululwe ebusweni bakho, kufanele udle lezi zinqubo.
Ikhambi lamadoda ebusweni bezinhlamvu zikakolweni ezihlumekile
Sizokhulisa okusanhlamvu okolweni, qala ekuseni noma emini. Thatha izipuni ezintathu zokusanhlamvu, uhlanza kahle ngaphansi kwamanzi agijima. Ngemva kokuwuthululela emgodini wamanzi bese uwugcwalisa ngamanzi. Kumele kuhlanganise okusanhlamvu. Sithatha amanzi azinzile futhi angabanjwanga. Sithatha kancane kancane i-potassium permanganate esiqongweni sommese, yifake embizeni bese uvuselela kahle. Futhi lokho kuzokhambela phezulu kwamanzi, sizoyithola futhi siyiphonye.
Khona-ke sizobe usawoti lamanzi, futhi sizophinde sigcwalise ngamanzi ahlanzekile angabonakali futhi ahlale njalo bese sishiya okusanhlamvu kuze kuhlwe. Kusihlwa sizobe usawoti emanzini, sihlanza ngokucophelela okusanhlamvu ngesihlungo, futhi sizophinde siyithumele ebhange bese siyishiya kuze kube sekuseni. Asigcwalisi okusanhlamvu ngamanzi. Vala kancane nge-lid, kodwa hhayi ngokuqinile.
Ekuseni, siphinde sihlanza okusanhlamvu ngaphansi kwamanzi, futhi uma kuvela amahlumela, uwafake embizeni amahora amabili noma amathathu. Ngemva kwamahora amathathu, okusanhlamvu sekulungele ngokuphelele. Uma amahlumela engaboni, sizobe sesihlanza okusanhlamvu kusihlwa bese sibeka embizeni kuze kube ngakusasa ekuseni.
Kusho ukuthuthukisa ukukhanya
Ukugcoba amagciwane ngilazi yamafutha omnqumo, ngqo kulo mmbi. Vala kakhulu futhi ushicilele inyanga engu-1. Emva kokusebenzisa le mafutha, hlambulula isikhumba sobuso, yenza lokhu inqubo 1 noma izikhathi ezimbili ngosuku, ekuseni nakusihlwa. Leli thuluzi linconywa ngohlobo olomile wesikhumba. Uma sigubha ebusuku, awukwazi ukugeza ekuseni. Uma ekuseni sifuna, bese emva kwemizuzu engu-30 sizogeza ubuso ngamanzi afudumele bese sifaka ubuso ngendwangu.
Iresiphi yekhambi le-vitamin neyabantu, sincoma ukuphuza esikhundleni setiyi, kuthinta ukuthuthukisa umbala wesikhumba
Sixhuma i-½ ithisipuni yamaqabunga wetiyi omile nge-1 isipuni se-rowan ama-berries omisiwe, ne-isipuni esingu-1 lamaqabunga ashisayo omisiwe. Brew lokhu okwakhiwa 1 indebe yamanzi abilayo, njengetiye evamile futhi uyiphuze nsuku zonke, okungenani izibuko ezimbili ngosuku.
Izindlela 10 Zokuthuthukisa Ukugqama
Sinikeza izindlela eziyi-10 eziphumelelayo zokusiza ukugcina nokuthuthukisa ubude isikhathi eside.
Umthetho 1. Sihlala sihlanza isikhumba sobuso ekuseni nakusihlwa. Kungaba ukugeza ubuso ngesipho noma enye i-agent ehlanzayo noma ukuxubha isikhumba ngama-lotions okuhlanza kanye ne-tonic. Ngisho noma ungazange usebenzise noma yimuphi u-make-up, isikhumba sidinga ukuhlanzwa. Phela, ngisho nasekhaya ngeke ukwazi ukuvikela isikhumba ekungcoleni.
Uma usebenzisa izimonyo njalo, i-powder, isisekelo, udinga ukukhumbula ukuthi ngaphambi kokulala, udinga ukuhlanza ubuso bakho. Ukuwa nge-makeup ebusweni bakho, isikhumba sakho sibhekene nokucindezeleka okukhulu futhi awudingi ukukhuluma nganoma yikuphi ukuthuthuka ekugqeni.
Isikhumba singangcoliswa izinwele, sithatha uthuli kanye nokucwilisa kahle, kudingeka uqiniseke ukuthi izinwele, futhi lokhu kubhekisela ezinyaweni ezinde, thinta isikhumba sobuso besincane. Ukuhlanzwa okwengeziwe kwesikhumba 1 noma izikhathi 2 ngesonto sisebenzisa izihlahla. Ngaphandle kokuhlanzwa okwanele kwesikhumba, akunakwenzeka ukuthi sizohlanza isikhumba futhi sithuthukise umbala wayo.
Umthetho 2. Ngisho noma usemusha futhi ungakhathazeki ngokukhethekile ngendwangu embi, ungakhohlwa, uhlanze njalo futhi ungeze isikhumba njalo. Esikhathini esizayo, lokhu kuyothinta isimo nesimo sobuso. Ngemuva kokuhlanza, sigcoba isikhumba ngesikhilimu esinomsoco esiphuthumayo nesondlo, nsuku zonke ekuseni nakusihlwa.
Ukuze uthole ukudla okunomsoco nokuphuthumayo, ama-masks asekhaya afanelekile.
Umthetho 3. Konke kufanele kube ngokulinganisela. Ungadluli izincomo ezingenhla uma uhamba ngemuva kobuso. Ukuze uphuthukise ngokwengeziwe isikhumba, ubuso abudingi ukusebenzisa inani elikhulu ukhilimu. Ungazibandakanyi ezikhaleni, kaningi akwenzi.
Indlela 2. Indlela yesibili ezosiza ekuthuthukiseni ubude ukudla okunempilo nokuphilile. Uma singekho ekudleni, asivamile ukulalela lokho esikudlayo. Phela, kukhona ukungahambisani nemikhiqizo edla ngesikhathi esisodwa, ukusetshenziswa okunganele kwemikhiqizo ewusizo, njengezithelo nemifino. Kungakhathaliseki ukuthi ukwedlulele kwemikhiqizo eyingozi, njengabaqaphi, ama-chips ahlukene, amnandi, okuthosiwe njalonjalo, konke lokhu kuthinta umbala wobuso bethu.
Umthetho 1. Ukuthuthukisa ubuso, umsebenzi wamathumbu, isibalo sizosiza ukuhlukanisa ukudla. Ungahlanganisi ukudla okufanayo okungavumelani. Ungathola kalula ithebula lokuhambisana lemikhiqizo kwi-intanethi uma usebenzisa injini yokusesha.
Umthetho 2. Ukuze uthuthukise ubude, udinga ukufaka ekudleni kwakho ukudla okuwusizo okunamavithamini amaningi kakhulu okudingekayo esikhumbeni sethu - inhlanzi. Kuyinto yomkhiqizo ogcwele futhi olula kalula, owathi, ngenxa yamafutha ayo okunomsoco namafutha, ngokuqondile uthinta umsoco wesikhumba. Ukuze ubuhle nempilo yesikhumba sethu kungukudla okwanele kwamaprotheni. Kusuka kwimikhiqizo yenyama udinga ukudla inkukhu enomvu futhi ephekiwe, inyama yenkomo, unogwaja, kanye nezilwane zasolwandle. Kusukela eminye imikhiqizo yiprotheni ye-soy, i-cottage shizi, ushizi, amaqanda abilisiwe futhi aluhlaza.
Isikhumba sobuso sidinga amavithamini E no-A, okuvimbela ukuguga ngaphambi kwesikhathi, ukugqugquzela i-hydration kanye nokudla okunomsoco.
Imikhiqizo enothambile i-vitamin A - sturgeon caviar, i-chum, i-carp, i-herring fatty, i-cottage shizi, ubisi, ukhilimu omuncu. Amaqanda, ibhotela, i-veal, ingulube, i-sturgeon nesibindi sezinyosi. Futhi izithelo ziphuzi, ama-apricot, ama-plums, i-papaya, i-melon, isaladi eluhlaza kanye neklabishi eluhlaza. Utamatisi, ithanga, i-broccoli, isipinashi, amazambane abasha, izaqathe.
Ukudla okunevithamini E egcwele ama-peas aluhlaza, ummbila, imifino, isobho. Futhi amafutha yemifino, ama-oat flakes, i-rye, ama-oats, ibhali, ahlume ukolweni kakolweni, amantongomane. Imikhiqizo esiza ukuthuthukisa ubumnandi yi-citrus, i-beetroot, i-carrot ijusi, i-melon, ikhabe, i-flaxseed.
Umthetho 3. Uma ufuna ukuthuthukisa ubumnandi, kuhle ukushiya ukudla okulimazayo, njengokuthi: izikhumba, ukudla okuthosiwe, izinongo, i-margarine. Imayonnaise, sausages, sausages, ukudla okuhlukahlukene okusemathinini, iziphuzo ezinomsoco omnandi.
Futhi udinga ukunciphisa ukusetshenziswa kweshukela nosawoti. Uma uyeka ukunamathela noma yikuphi isidlo, khona-ke ngesonto uzothola ukuthambisa ukunambitheka okungaqinisekisiwe. Ushukela ungashintshwa uju, futhi uma usufuna i-sweet, ungadla ushokoledi omnyama omncane.
Indlela 3. Sonke siyazi ukuthi amanzi yingxenye ebalulekile yokugcina amandla. Ukuntuleka kwamanzi kuthinta ukuguga nokuguga kwesikhumba ngaphambi kwesikhathi. Ukuze uthuthukise ukukhanya, kufanele uphuze okungenani amalitha ayisithupha nengxenye yamanzi ahlanzekile ngosuku. Isikhumba sizohlala siphuthunyiswa njalo. Ngaphansi kwamanzi ahlanzekile sisho amanzi ancibilikile noma amanzi entwasahlobo. E-intanethi ungathola indlela yokulungisa kahle amanzi aphulikayo.
Indlela 4. Ukuze uthole impilo enhle nokuthokoza, umoya uyinto ebalulekile ekusebenzeni ngokugcwele kwayo yonke imisebenzi yomzimba nokugqama okunempilo. Uma uchitha isikhathi esiningi emakamelweni, khona-ke umzimba wabo awunakekelwa kahle nge-oxygen. Ngaphezu kwalokho, umoya ugcwele izinto ezinobuthi, iziphunga eziyingozi zembala ehlukene kanye ne-varnishes. Lokhu kuholela kumbala obomvu nokuphelile kobuso.
Indlela 5. Kubalulekile ukugcina isikhumba ngezwi, kanye nokubukeka ukuhamba. Kubonakala sengathi ukunyakaza kuthinta isimo somzimba, kodwa hhayi ebusweni. Kodwa lokhu akulona iqiniso ngempela. Ukuhamba komzimba kuthuthukisa umzimba futhi kusiza ukuhlanza umzimba. Futhi izinqubo zithinta isimo sesikhumba sobuso. Unganaki ukuvivinya umzimba, futhi uma kungenakwenzeka ukuba ujoyine amaqembu empilo, kudingeka usebenzise umzimba ekuseni bese uhamba phambili usuku lonke. Ukuhamba emoyeni omusha, lokhu kuyindlela enhle kakhulu yokuthuthukisa ubuso.
Indlela 6. Umzimba wakho udinga ukuphumula okugcwele. Ngaphezu kwalokho, amaseli esikhumba avuselelwa futhi avuselelwe ngesikhathi sokulala. Uma uvame ukungatholi ngokwanele, ngokushesha noma kamuva kungathinta ubuso. Ukulala kufanele kunikezwe okungenani amahora angu-7 noma angu-8 ngosuku. Ukuze uthuthukise ukukhanya, kufanele ulale embhedeni, futhi kungakapheli ngo-10 ntambama.
Indlela 7: Izinto ezinobungozi ezifana nekhofi, utshwala, ugwayi kuthinta ukuwohloka kobala. Ngakho cabanga ukuthi udinga lokhu ukubhema. Kodwa kunjalo umuntu owazi ukuthi konke kuyingozi, uyaqhubeka ebhema. Futhi lokhu kuzothinta amandla, ukujabula, umbala wobuso, impilo. Lokhu kusebenza kotshwala nekhofi. Futhi uma ungeke ulahle ngokuphelele iziphuzo ezinjalo, okungenani unciphise ukusetshenziswa kwazo okungenani.
Indlela 8. Izimo zokucindezeleka, ukwesaba okukhulu, kuthinta isikhumba. Umsebenzi omkhulu kunzima ezimweni ezinzima ukuthi ungesabi, ungakhathazeki. Kodwa ukuze uthuthukise ubude, udinga ukulawula ukuzwela kwakho.
Indlela 9. Indlela yesishiyagalolunye ingumzwelo omuhle futhi ukumomotheka. Lapho umphefumulo ujabula futhi ulula, konke lokhu kubonakala ukukhanya emehlweni akho nokukhanya okumnandi kwesikhumba. Uma umuntu ejabule futhi ejabule, akenzeki, enganelisekanga ngokubonakala kwakhe, kodwa kubonakala kwabanye abantu futhi yena, obala, njengangakaze kwenzeke ngaphambili.
Indlela 10. Le ndlela isisiza ukuthuthukisa umbala wesikhumba, futhi, ngokuqinisekile, ngamaski, kusuka kuzimonyo zasekhaya.
Manje siyazi ukuthi kungenzeka kanjani ukwenza amaski ukuthuthukisa ubuciko, izikhambi zabantu. Uma usebenzisa lezi masks namathiphu okuthuthukisa ubuso, ungafaka ubuso bakho ngokuhlelekile.
Ukusetshenziswa okuwusizo kwe-hydrogen peroxide ebusweni
Ama-radicals namahhala okuguga
Imikhiqizo yokucwenga isikhumba senkinga
U-Ilya Glinnikov noKatya Nikulina balungele umshado
Indlela yokuxhumana ne-stepon
Ukulala nokubaluleka kwayo empilweni
I-mascara enomphumela we-eyelashes angamanga
Izindlela zomphakathi zokwelapha izinsini
Uma ungethula umfana emndenini wakhe
Amaqebelengwane e-Lemon kanye nokakhukhunathi
Ukudla, izindlela eziphumelela kakhulu futhi ezisheshayo zokulahlekelwa isisindo